छाती, triceps - उचित प्रशिक्षण। फ्रान्सेली पीठ - लाभ
यसलाई अब उद्देश्य जो एकदम लोकप्रिय शरीर निर्माण र अन्य बल खेल भएको छ मांसपेशिहरु को एक सेट र शक्ति प्रदर्शन मा वृद्धि। हुनत सबै भन्दा शुरुआती राम्ररी लोड, त्यसको विपरीत, वितरण गर्न सक्दैन, र त अत्यधिक जोस ग्रस्त, वा व्यायाम सीमित नम्बर बनाउन यो प्रवृत्ति, स्पष्ट सकारात्मक छ। र ती र अरू एक नियम, अनुमति र अन्य त्रुटिहरू, अर्थात् रूपमा - गलत अभ्यास र तिनीहरूलाई को गलत चयन। हामी newcomers को मूल उद्देश्य कुरा भने, तिनीहरूलाई को भन्दा इच्छुक छन् हात पंप जो एकदम तार्किक छ, र छाती। आखिर, यी मांसपेशीमा बलियो र तुरुन्तै स्पष्ट, माथि पम्प्ड।
तर विकसित हात मांसपेशीमा newcomers पछि लाग्नुलाई मा अक्सर आफ्नो ध्यान अन ध्यान पम्पिंग बाइसेप, मुख्य विशाल हात को triceps दिन्छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद। जस्तै फ्रान्सेली पीठ प्रेस, र अरु, होइन उल्लेख आधारभूत अभ्यास प्रयोग गरेर सबै मांसपेशी समूहहरु पम्पिंग महत्त्व रूपमा - तिनीहरूले triceps लागि महत्त्वपूर्ण अभ्यास गर्छन्। तर त्यहाँ कुनै आधार छ भने - कुनै हतियार र छाती पम्प्ड। ताकि सबै भन्दा शुरुआती कसरी पीठ प्रेस गर्न खातामा लिन छैन, pectoral मांसपेशीमा लागि आधारभूत अभ्यास प्रदर्शन को प्रविधी ध्यान।
विशेष बीम triceps (तीन-हेडेड हात मांसपेशी) र शिशुहरू मा, प्रत्यक्ष मांसपेशी काम कुरा, यो तिनीहरूले सामान्यतया पीठ प्रेस, ताराहरु, पुस जस्तै यस्तो अभ्यास पूरा (टी मा। एच बारहरू मा) सँग संयोजनमा सञ्चालन, र उल्लेख गरेको छ एट अल। तसर्थ, पीठ प्रेस, अर्थात् मा वृद्धि, पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या र liftable वजन को संख्या द्वारा हासिल छ र pectoral मांसपेशी पम्पिंग र triceps अधिक पृथक पम्पिंग। यसको लागि अभ्यास को एक जटिल विविधता मा लागू हुनुपर्छ। तर विशेष भूमिका फ्रान्सेली पीठ प्रेस द्वारा प्ले।
निम्नानुसार उत्तरार्द्ध को प्रविधी छ। पहिले, तपाईंले सही पोस्ट जो कम्तिमा 10 पटक हो यसको वजन, छनौट र सुसज्जित हुनुपर्छ, तपाईं उचाल्न सक्छ। पट्टी को पट्टी लागि रूपमा अझ राम्रो र सुविधाजनक छ भने गर्न सकिँदैन - ईजी-जस्तो, तर तपाईं यो बिना गर्न सक्नुहुन्छ। दोश्रो, तपाईं घर (तेर्सो) स्थिति जान आवश्यक, यो खुट्टा हार्ड तल्ला मा विश्राम महत्त्वपूर्ण छ। अर्को, तपाईंको हथियार पोल सम्म, तपाईं धीरे निधारमा तिनीहरूलाई मोड गर्न आवश्यक सीधा (प्राथमिकताको थप अलिकति), को कुहिनो पोस्ट को निधारमा देखि लगभग पाँच सेन्टिमिटर रोक बारेमा एक 45 डिग्री कोण, गठन सकून्। यो स्थिति बाट, पुनरावृत्ति परिणामस्वरूप, हातमा सीमा (को कुहिनो मा 90 डिग्री) सीधा गर्न। यसरी सम्पूर्ण सेट गरिन गर्न, पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या संख्या जो, पहिले नै उल्लेख रूपमा, प्रयोगले कार्यक्रम र प्रशिक्षण गर्न छुट्याइयो फ्रान्सेली पीठ सकिएपछि समय आधारमा 10 पटक वा अधिक।
यो पनि अभ्यास केही बल र मांसपेशी विकास प्रगति मा "ठहराव" परहेज, एउटै जटिल एक लामो समय को लागि लागू गर्न आवश्यक छैन भनेर सम्झना गर्नुपर्छ। साथै, फ्रान्सेली पीठ प्रेस अधिक तीन महिनाको अवधिको लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम मा आफ्नो समावेश संग कुहिनो संयुक्त गर्न क्षति हुन सक्छ। यो व्यायाम लागि ठूलो भार बिल्कुल आवश्यक बीमा, साथै fixation हुँदा (घुमावदार) पट्टियाँ कोहनी। तथापि, सम्भव समस्या बाबजुद, फ्रान्सेली पीठ प्रेस स्पष्ट लाभ आधारभूत बल पम्पिंग triceps, विशेष गरी लामो बीम लागि अभ्यास रूपमा छ।
अभिन्न नियम, "पिचिंग" पनि उचित पोषण, व्यक्तिगत को संरचना र सबै भन्दा कुशल प्रशिक्षण योजना छ। जस्तै पीठ प्रेस, रूप - यो आधारभूत अभ्यास समावेश गर्नुपर्छ deadlifts, पुल-अप पट्टी। यो बाँकी र सुत्दा rationally योजना महत्त्वपूर्ण पनि छ। हथियार र छाती मा मांसपेशीमा को नियम र पूर्ण समर्पण सबै अपेक्षा गरिन्छ जब पम्पिंग र मांसपेशिहरु को एक साधारण सेट हुन।
तल्लो प्रेस लागि व्यायाम: एक सपाट पेट प्रत्याभूति छ
धेरै कठिनाई बिना triceps कसरी डाउनलोड गर्ने
वजन छिटो मान्छे 17 वर्ष कसरी हासिल गर्न? एक किशोरी Norma को वजन र उचाइ
को ढलान मा बेल्ट गर्न जोर रड: प्रदर्शन प्रविधी, विभिन्नता र आधारभूत त्रुटिहरू
कसरी आवेदन iPhone मा स्थापना: शुरुआती लागि निर्देशन
कस्तो neologism छ, र यो भाषामा देखा
Romberg गरेको परीक्षण - यो के हो? Romberg मा vestibular नमूना
मिलान के हेर्न? सबैभन्दा रोचक ठाउँमा छोटो पुस्तिका
"Tinkoff क्रेडिट सिस्टम": समीक्षा र जानकारी
प्रशासनिक पेनाल्टी: आफ्नो प्रदर्शन को र सीमितता को विधान
सुन्ताला र कागति संग zucchini को जाम। को जाडो लागि जाम खाना पकाउने
Gapps - यो के हो? कसरी स्थापना गर्न र Gapps हटाउन?
"Fili" - Watersports महल: विवरण, ठेगाना, मूल्यहरू समीक्षा
Votkinsk Reservoir: जलाशय वर्णन, मनोरञ्जन, माछा मार्ने
Vicente डेल Bosque - "रियल" र स्पेन को पौराणिक कथा